बेरोजगार जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउन स्थानीय तहलाई फ्रन्टलाइनमा राखिने, यसरी गरिँदैछ कृषिमा आकर्षित – कृषक र प्रविधि
सरकारले हरेक प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको ‘हब मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई एक अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको ३.१६ प्रतिशत हो । कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी स्वदेशी कृषि उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
कृषिको पुनर्जागरणका लागि स्थानीय तहलाई फ्रन्टलाइनमा राख्ने योजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बनाएको छ । ‘खेतीयोग्य जमिन उपयोग, खेती भइरहेको जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने, कृषिमा लाग्न चाहने युवालाई मल, बीउ, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित सामानको बजार पहुँच स्थापित गराउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी बताउँछन् । उनले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बताए ।
यद्यपि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको उपलब्धि हेर्दा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा वार्षिक रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइने गरे पनि यो परियोजनाको उपलब्धि निकै न्यून छ । अझ हरेक वर्ष यो परियोजनामा आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारका मुद्दा बाहिरिने गरेको छ । सरकारले यसैमार्फत कृषि क्रान्तिको सपना देखेको छ । चालू आर्थिक वर्ष यस आयोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
किसान परिचय पत्र केही जिल्लामा पाइलटिङ गरेर वितरण कार्यको थालनी गरेको थियो तर रोकिएको छ । कृषि मन्त्रालयलका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार यसको निर्देशिका बनेको छ तर सूचीकरण गर्ने सफ्टवेयर बनिसकेको छैन । अझै किसान सूचीकरणका लागि केही समय लाग्नेछ । यसको जिम्मा पालिका सरकालाई नै दिने डा. केसीको भनाइ छ ।
कतिपय ठाउँमा विद्युतको पहुँच नपुग्दा सिँचाइमा समस्या रहेको प्राक्टिल एक्सनको अध्ययनले देखाएकोे छ । १४ लाख ७३ हजार हेक्टर धान खेतीको सम्भावना रहेको भूमिमा वार्षिक ३३ प्रतिशत मात्र सिँचाइ सुविधा भएको सो अध्ययनले देखाएको छ । २.२ प्रतिशत सिँचाइ डिजेल पम्पबाट हुने गरेको छ । विद्युतको पहुँच नभएको ठाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट सिचाइ सुविधा दिएर उर्जा बचत गर्न सकिने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्राक्टिकल एक्सनले हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत मे २०२० मा इनरजाइजिङ एग्रिकल्चर सेक्टर इन नेपाल विषयमा रिसर्च गरेको थियो ।
यता वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई सौर्य सिँचाइ उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । एईपीसीले २५ सय गाउँमा जलविद्युत आयोजना बनाएको छ । प्रारम्भिक उद्योग स्थापनाका लागि मेसिन खरिद गर्न सहुलियत दिने र प्रविधि सिकाइदिने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले बताए । केन्द्रले कृषकको लागि पम्प, मालवस्तु सुकाउन प्रभावकारी हुने ङ«ायर सहुलियतमा दिने, प्रविधि, सीप सिकाउने जस्ता काम गर्न सक्नेछ ।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बाहेकका अन्य सहजता मात्र प्रदान गर्न सकिने बताएको छ । वित्तरण तथा ग्राहक निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेका अनुसार उद्योगहरूले लाइन लिने विषयमा सहजता प्रदान गर्नेछ ।
कोभिड १९ का कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई अवसरमा बदल्न उनीहरूलाई कृषिमा जोड्न भूमिसम्मको पहुँच विस्तारका लागि भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सङ्घ तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा चालू आर्थिक वर्ष ३ सय स्थानमा भूमि बैङ्क एकाइ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
भूमि बैङ्कले लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वमा रहेको तर उपयोग नभएको जमिन, नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्य गर्न चाहनेका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने छ । लिजमा उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइने सरकारी लक्ष्य छ । बाँझो जमिन धेरैै भएको ठाउँबाट भूमि बैङ्कको स्थापना सुरु गरिनेछ । भूमि बैङ्कका सेयर लगानीको लागि सरकारले ५० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ ।
कोभिड–१९ पछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवाहरूलाई स्वरोजगार र कृषि उद्यमी बनाउन समेत भूमि बैङ्कले काम गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा बताएकी थिइन् । यता मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेका अनुसार भूमि बैङ्क कार्यान्वयनका लागि कसरी जाने भन्ने ढाँचा बनाउने क्रममै रहेकाले कार्यान्वयन दशँैपछि मात्र हुने बताउँछन् ।
कृषि सामग्री, मल खाद्य, मेसिनरी बिक्री गर्ने सप्लायर्स कृषि विकास बैङ्कको मर्चेन्ट (एजेन्ट) हुन्छ । उनीहरूले कार्डमा क्युआर कोड राखिएको हुन्छ सो क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी लिन सकिने गरी किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्न लागिएको कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । यो मोबाइल सिस्टमबाट कार्डको क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी हुनेछ । कार्डको पहुँच हुने मोबाइल एप्लिकेसन विकास कृषि विकास बैङ्कले गर्छ । सो एपमार्फत स्क्यान गरेर भुक्तानी हुन्छ । सो कार्ड लिनका लागि कृषि विकास बैङ्कमा खाता खोलेको हुनुपर्नेछ ।
तामझामका साथ आजभन्दा तीन वर्षअघि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दुई वर्ष कार्यान्वयनमा गइसकेको र चालू आव समेत गरी कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षमा छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्रमा रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सुरु भएको हो ।
कार्यान्वयनको दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने रोजगारी सङ्ख्या बढाउने तर दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सकेन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत २ वर्षको अवधिमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ११ करोड खर्च पनि भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा (२०७५ र ०७६) यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्यो । सो वर्ष १ लाख ८७ हजार युवाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ । यसका लागि ५ अर्ब १ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा देशभरबाट १७ लाख बेरोजगार नागरिकले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत किसानका लागि ऋण दिँदै आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस्तो ऋण २३ हजार ३ सय १८ जना ऋणीले यस्तो ऋण उपभोग गरेका छन् । यसका लागि ५१ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ लगानीमा रहेको केन्द्रीय बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकार भट्ट बताउँछन् ।
सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रममा बर्सेनि बजेट छुट्याए पनि त्यस्ता कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ वास्तविक किसानले लिन नपाएको किसानहरूले गुनासो गरेको छन् । राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान नै नगरी गैरकिसानलाई लाभ दिएको आरोप लगाए । ब्याजमा अनुदान, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कृषक लक्षित कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव आफु र महासंघ सम्बध कुनै पनि किसानले गर्न नपाएको बताए । अनुदान दिदा जो खनिखोस्री कृषि पेशा गरेर बसेका किसान छन् उनीहरूले राज्यको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने र किसान बर्गीकरण हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
तर यता बाँकेका किसान मगनसिंह थापाले भने गत वर्ष २ बिघा तरकारी खेती गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चार लाख लिएका रहेछन् । सो अनुदानका लागि पहिला नै खरिद बिल पेस गर्नुपर्ने भएकाले झन्झटिलो भएको उनले बताए । अनुदान लिन धेरै पटक धाउनु परेकाले यस पटक अनदान नलिने पक्षमा उनी पुगेका छन् । टमाटर खेतीबाट घाटा भएपछि भाडामा लिएको जग्गासमेत फिर्ता गरिसकेका छन् ।
यद्यपि कोभिडका कारण गाउँ फर्केका जनशक्तिहरूले पहाडी जिल्लाका अधिकांश भूभाग खेती गरेर हरियाली बनाएको राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, झापामा गरेको स्थलगत अध्ययनमा युवाहरू कृषिमा लागेका देखिएको छ । महासङ्घले अहिले कोभिडपछि कृषिमा कस्तो असर परेको छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ ।
यता सिराहाका किसान अमिरलाल यादव सहरमा बसेका जनशक्तिले केही बाँझो भूमिमा तरकारी खेती गर्न थालेको बताउँछन् । लाहानको १३ नम्बर वडामा केही युवाले बाँझो रहेको खेतमा कृषि फर्म गरेका छन् । बाँके खजुरा गाउँपालिका वाड नम्बर १ का मगनसिंह थापा सामान्य किसानलाई सरकारको अुनदान कसरी लिने भन्नेसमेत थाहा नभएको बताउँछन् ।